TAGNAMARO TENY AMIN’NY EPP AMBOHIPO: Mamantana sekoly vaovao ireo mpianatra - ewa.mg
News - TAGNAMARO TENY AMIN’NY EPP AMBOHIPO: Mamantana sekoly vaovao ireo mpianatra
Nirodorodo teny amin’ny EPP Ambohipo indray ny ratsa-mangaika rehetra mandrafitra ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina (MSK) nanao « tagnamaro: andron’ny olom-pirenena”, ny 27 aprily 2019. Nanatevin-daharana ny hetsika ireo mpampianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra, ireo mponina ao amin’ny fokontany Ambohipo, ireo fikambanana maro toy ny Fandio, Ivoarana… Nizara ekipa maro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ka tao no nisahana manokana ny fandokoana ny atiny sy ivelany ary ny “plafond” an’ireo efitranon-tsekoly miisa 12 amin’ny 16, ny fandokoana ny varavaran-kely sy ny varavaram-be ary ny solaitrabe, ny fandokoana ny ivelan’ny biraon’ny talen-tsekoly, ny fandokoana ny tamboho… Nisy tamin’ireo ekipa no nanala ny lobolobo manodidina ny sekoly. Tao ihany koa no nanamboatra ny zaridainan’ny sekoly tamin’ny alalan’ny fanamboarana ny fefiny, ny fambolena voninkazo vaovao. Ankehitriny, mamantana ny sekoly vaovao ireo mpianatra.
Nambaran’ny talen-tsekoly, Raharimalala Fidelys Voahirana fa feno 57 taona ny sekoly. Hatramin’izay mbola tsy nisy ny fanavaozana ny EPP afa-tsy ny fanamboarana fanampina efitranon-tsekoly, novatsian’ny firenena japoney. “Mitondra fiovàna ho an’ny sekoly izao tagnamaro izao ka maneho ny fisaorana mitafotafo ny ekipan’ny minisitera sy ireo nanome tanana rehetra izahay”. Iray andro monja dia nahavita asa maro ireo mpanao tagnamaro notarihin’ny minisitry serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana. Ankoatra ireo tonga teny an-toerana dia nanampy ara-pitaovana ihany koa ireo orinasa sasantsasany miasa eto Madagasikara. Tsy ny teto an-drenivohitra ihany no nanao tagnamaro fa saika nahitàna hetsika avokoa nanerana ny Nosy. Ny 17 mey 2019 indray ny fotoana manaraka.
Cet article TAGNAMARO TENY AMIN’NY EPP AMBOHIPO: Mamantana sekoly vaovao ireo mpianatra est apparu en premier sur déliremadagascar.
Nivoaka tamin'ny : 06/05/2019
Andrim-panjakana :: Feno ireo mpikambana sivy ao amin’ny HCC
Notendren’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny alalan’ny didimpanjakana, omaly, ireo mpikambana telo anjarany ao amin’ ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Isan’ireo Rahelimanantsoa Rondro Lucette, sekretera jeneralin’ny gover-nemanta, nanomboka ny 21 jona 2018 ka hatramin’ny omaly. Efa mpikambana tao amin’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (CES) ihany koa izy, tamin’ny taona 2013. Rakotobe Andriamarojaona Vololonirina Christiane sy Mbalo Ranaivo Fidèle no mpitsara avo roa hafa notendren’ny Filoha, omaly. Filohan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana tany Antsiranana teo aloha hatramin’ny taona 2016 i Mbalo Ranaivo Fidèle. Nankatoavin’ny Filoha tamin’ny alalan’io didimpanjakana io ihany koa ny fanendrena an’ireo mpikambana enina hafa avy amin’ny fifidianana nataon’ny Antenimiera roa tonta sy ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara. Raha tsy misy ny fiovana dia amin’ny herinandro ambony no handray ny andraikiny vaovao ireo mpitsara avo sivy mianadahy ireo. Aorian’izay kosa no hanatontosana ny fifidianan’izy ireo an’izay ho filohany ka handimby andRakotoarisoa Jean Eric. L’article Andrim-panjakana :: Feno ireo mpikambana sivy ao amin’ny HCC est apparu en premier sur AoRaha.
Ady amin’ny Covid-19: nanome kojakojam-pahasalamana ny mpiasan’ny Cnaps
Nanolotra fanampiana ny foibe CCO eny Ivato, omaly, ny mpiasa ao amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps). Kojakoja ara-pahasalamana, ilaina amin’ny fiatrehana sy ny fisorohana ny Covid-19, toy ny arotarehy (visière), ny arotanana, ny arovolo, ny aroakanjo, ny arokiraro, ny aromaso, ny tsirano-panafody fanasana tanana (gel), sns. Nambaran’ny tale jeneralin’ny Cnaps, Rakotondrainibe Mamy, fa mitentina 60 tapitrisa Ar ireo fanampiana ireo, ary notsipihiny fa tsy avy amin’ny Cnaps fa avy amin’ny mpiasa ao aminy. Tamin’ny alalan’ny andro tsy fiasana (congé) no navadika sandam-bola ka nisy ny nanana herinandro, 10 andro, hatrany amin’ny roa volana.Maro ny mpiasan’ny Cnaps tratry ny aretina Coronavirus, nahatratra hatrany amin’ny 35%, vokatry ny asa tsy maintsy ataony. Sitrana anefa ny ankamaroan’izy ireo ka nahatsapa fa misy ny adidy ataony amin’ny mpiara-belona ka izay ny nahatonga azy ireo nivondrona nanolotra izao fanampiana izao.Etsy ankilany, niaiky ny mpandrindra nasionaly ny CCO, ny jeneraly Andriankaja Elack Olivier, fa maha te hidera tokoa izao ezaka nataon’ny mpiasan’ny Cnaps izao ary tena fitaratra ho an’ny hafa. Vitsy ny mpiasa mahavita toy azy ireo. Nanome toky ny tenany fa hotantanina ao anatin’ny mangarahara tanteraka ireo fanampiana ireo, ary efa hita izany ao anatin’ny adiresy tranokala site web-n’ny CCO.Njaka A.L’article Ady amin’ny Covid-19: nanome kojakojam-pahasalamana ny mpiasan’ny Cnaps a été récupéré chez Newsmada.
Maty tsy tra-drano ny vehivavy iray, 46 taona, tany Soagogo-Ankaraobato any Marovoay, afak’omaly vokatry ny tsindron’antsy nahazo azy. Araka ny vaovao avy any an-toerana dia nisy olana teo amin’ny tokantranon’ny zanany vavy ka niafara tamin’ny tsindron’antsy nataon’ny vinantolahiny azy. Tafatsoaka sy mbola karohina io nahavanon-doza io hatramin’ny omaly. « Efa nifamaly hatramin’ny alin’ny 26 jona lasa teo ireo mpivady zanak’ilay vehivavy maty. Tokony tamin’ny 2 ora maraina, ny 27 jona, no nisy nilaza taminay fa nanindrona antsy ny rafozany ilay lehilahy. Taorian’izay no nitsoaka izy ka mbola karohina hatramin’izao. Nilaza ny teo amin’ny manodidina fa noho ny adin’ny mpivady, misy ny zanaka vavin’ilay namoy ny ainy, no nitarika tamin’izao fikasihan-tanana niafara tamin’ny fahafatesana izao »,hoy ny mpitandro filaminana. L’article est apparu en premier sur AoRaha.
Fiainam-pikambanana: nahazo tohana ireo mpitarika CS ANR
Tsy nanadino ireo mpitarika sy mpanentana mikambana amin’ny CS ANR eny anivon’ny boriborintany enina miampy an’Atsimondrano sy Avaradrano ary Ambohidratrimo ny eo anivon’ny foiben’ity fikambanana ity. Anisan’ny mitarika izany ny filoha nasionaly, Raharison Gabrielle. Niaiky izy ireo fa tena nandalo krizy sy fahasahiranana tokoa ny rehetra, saingy nitondra ny voatsirambin’ny tanany amin’izao fety izao. Ahitana entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN) toy ny vary, menaka, atody, siramamy. Maherin’ny 300 ireo nisitraka izany ary natolotra azy ireo tetsy amin’ny Arena Alarobia, omaly, izany. “Solontena ihany izao nisitraka fanomezana izao. Fanampiana tsy natao hahavita taona akory fa ny fo manolotra azy no betsaka. Antenaina hiova ny zava-misy eto amin’ny firenena amin’ny herintaona ka ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika amin’izany”, hoy ny mpitarika. Anisan’ny nanao ny fomba rehetra hanampiana sy hanatanterahana ny vinan’ny filoha ny CS ANR.Synèse R.L’article Fiainam-pikambanana: nahazo tohana ireo mpitarika CS ANR a été récupéré chez Newsmada.
RN2 : Fiarabe roa nifandona, olona roa naratra mafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray tamin’iny lalam-pirenena faharoa iny , ny sabotsy tolakandro teo. Fiarabe roa, ny iray handeha hiatsinana ary ny iray hiakatra aty An-drenivohitra no nifandona teo amina toerana iray, tsy hidirana an’i Ranomafana. Samy feno entana ireto fiarabe ireto ka azo eritreretina amin’izany ny hamafin’ny fifandonana. Voalaza ihany koa moa samy nandeha mafy. Araka ny fampitam-baovao azo, dia olona efatra izy ireo no tao anatin’ireto kamiao roa ireto. Ny roa no avotra soa aman-tsara, fa ireo mpamily roa lahy kosa no samy voa mafy. Ny iray aza moa dia mbola tsy nahatsiaro tena tamin’ny fotoana nitondrana azy tany amin’ny toeram-pitsaboana ary tena ahiana mafy ny ainy. Samy potika tsy nisy noraisana kosa ny lohan’ireto fiara ity ireto araka ny hita etsy amin’ny sary. Vokatr’ity lozam-pifamoivoizana ity , dia tapaka nandritra ny fotoana naharitraritra ny fifamezivezena tamin’iny lalam-pirenana mampitohy an’Antananarivo sy ny renivohitr’i Betsimisaraka iny, ny sabotsy lasa teo. Fa mbola lozam-pifamoivoizana tamina lalam-pirenena, nitranga tetsy amin’ny kaominina Anonibe, distrika Miarinarivo, ny sabotsy teo ihany. Fiara kely iray nivoaka ny làlana, nitsimbadimbadika ambony ambany ary niafara teny an-tanimbary. Vokany potika tanteraka ilay fiara. Araka ny fampitam-baovao azo avy tamin’ny mpitandro filaminana tany an-toerana dia olona roa no tao anatin’io fiara io. Lehilahy sy vehivavy, izay samy naratra mafy avokoa. Na dia somary natahorana ihany aza dia nambara fa avotra soa aman-tsara avokoa izy ireo, rehefa nahazo fitsaboana tany amin’ny hôpitaly. Raha ny fanazavana azo hatrany, dia vokatry ny olana teknika, teo anivon’ny « transmission » no nahatonga ity loza ity. Ny zandary misahana ny lozam-pifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena no misahana ny raharaha sy nanao ny fanadihadiana. m.LL’article RN2 : Fiarabe roa nifandona, olona roa naratra mafy a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Efa nahazo 65 tapitrisa Ar…: saron’ny polisin’ny BC ilay vehivavy misoloky mampitombo vola
Naiditra am-ponja avy hatrany rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny vehivavy iray malaza ratsy amina fisolokiana avolenta.Milaza izy fa hoe afaka mampitombo vola ka mindram-bola amin’olona… Ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) no nahasambotra ity mpisoloky gagivavy ity. Araka ny fanazavan’ny polisy, tsy latsaky ny 15 ny fitoriana voarain’izy ireo momba ity vehivavy mpisoloky ity. Mody mandresy lahatra olona hampindram-bola azy ka hampitomboany avo roa heny izany rehefa tonga ny fotoana hamerenany ny vola. Maro ireo olona resy lahatra ka nampindrana azy, misy ireo tafaverina soa aman-tsara ny vola ary nahazo tombony tokoa. Tamana ireo olona ary notakiny vola misimisy indray mba hampiasaina ka nanome tsy am-pisalasalana tokoa ireo olona. Milaza ihany koa izy fa hoe manana tetikasa ho fanampiana ny tantsaha ka miresaka amin’ireo olona vonona hampiasa vola indray fa haveriny avo roa heny. Maro koa ireo tafaroboka nanome vola azy. Misy hatrany amin’ny 65 tapitrisa Ar ny vola samboriny amin’ireo olona solokiny. Ny fomba fanaony, ireo vola nosamboriny ireo ihany no hamerenany ireo vola nalainy tany an-kafa hoentiny manome toky ilay mpampindram-bola. Fitaka avolenta anefa ny ambadik’izany. Rehefa tonga ny fotoana nifanarahana hamerenana ny vola, arirarirany eny fotsiny ilay tompom-bola ary tsy hita intsony izy aorian’izay. Tsy misy koa ilay tetikasa lazainy fa fomba akany vola ankolaka amin’ireo olona solokiny, raha ny fanazavan’ny polisy hatrany. Tratra ihany anefa izy taorian’ny vela-pandrika nataon’ny polisy. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.Jean Claude Sary MpisolokyL’article Efa nahazo 65 tapitrisa Ar…: saron’ny polisin’ny BC ilay vehivavy misoloky mampitombo vola a été récupéré chez Newsmada.
Madajazzcar 32ème édition : Hommage à Désiré Razafindrazaka
« Car Desiré Razafindrazaka a abattu un travail titanesque, nous ferons en sorte que Madajazzcar porte haut le flambeau du jazz. » Tels sont les mots de Jacquis Ranarison membre du comité d’organisation du Madajazzcar lors de l’annonce de la présentation de la 32ème édition de ce festival international du jazz. En dépit de la conjoncture actuelle, la programmation s’étendra du 8 au 17 octobre un peu partout dans la capitale et à Antsirabe. Plusieurs soirées et multiples concerts seront dédiés à Désiré Razafindrazaka, père du Madajazzcar, survenu au mois d’avril dernier. En son honneur, la soirée d’ouverture tournera autour de la basse, son instrument de prédilection. S’il a consacré beaucoup de son temps à la vulgarisation du jazz, les centres culturels rejoignent la cause en proposant des concerts gratuits, dans le cadre de la promotion du jazz. Entre autres, des masterclass et des échanges artistiques tiendront une place prépondérante dans la programmation afin de mettre en valeur la formation et le partage artistique entre les festivaliers. Le rideau tombera au Théâtre de verdure Analamaitso avec la participation des formations, groupes et artistes locaux. Encadré Programmation 08/10 : Ouverture à l’IFM Analakely à 19H : Concert autour de la basse 09/10 : Cabaret avec Solo Andrianasolo au Chick’n Art Ankorondrano 10/10 : Jazz brunch Avec Sandrine Rajaofetra à l’Ibis Ankorondrano 13/10 : Jazz à l’Université Cabaret Avec Jazz quart à l’Hôtel de l’Avenue Analakely 14/10 : Hommage à Désiré Razafindrazaka au Kudéta urban Club 15/10 : AFT Andavamamba : concert avec l’Af jazz 16/10 : Podium au Théâtre de verdure Analamaitso avec Jazz club Cgm, Really Jazz, Solo Andrianasolo, Andy Razafindrazaka Group, Joro J quartet 17/10 : Concert avec Tsanta Quartet à la Résidence de Suisse Zo Toniaina L’article Madajazzcar 32ème édition : Hommage à Désiré Razafindrazaka a été récupéré chez Midi Madagasikara.